Prof. Geedi oo ka degay Jowhar
Wafdigii uu hogaaminayay Ra,iisul Wasaare Prof. Cali Max'ed Geedi ayaa maanta ka degay Magaaladda Jowhar ee gobolka Shabelleha Dhexe.
Prof. Geedi oo ay la socdaan xubno ka tirsan golihiisa wasaaradda ayaa wararku sheegayaan in si wayb loogu soo dhaweeyay Magaaladda Jowhar. Dadwayne isugu jira mas'uuliyiinta gobolka, shacabka iyo aradada dugsiyada ayaa tubnaa agagaarka wadooyinka si ay u soo dhoweeyaan wafdiga Raiisul Wasaare Geedi.
Sida wararku sheegayaan waxaa ka mid wafdiga la socda Prof. Geedi madax ay ka mid yihiin Salim Caliyow Ibrow, Mowliid Macaan iyo xildhibaano ka socda Baarlamaanka .
Col. Yusuf oo isna Gaaray Jowhar
Warar kale oo magaaladda Jowhar naga soo gaaray ayaa sheegaya in Madaxwaynaha J. F ee Somaliya Mudane Cabdullahi Yusuf uu isna soo gaaray Magaladda Jowhar.
Mudane C/hi Yusuf oo Saacado ka dib soo gaaray ka dib markii uu Raiisal Wasaare Geedi soo gaaray isla Magaladaas ayaa la filayaa in ay ku negaadaan Jowhar saacado ka dibna uga gudbaan Garowe.
Dadwayne fara badan, Masuuliyinta Gobolka oo u horkacaayo Maamulaha Gobolka Shabeelaha Dhexe Maxamed Dheere, Ra'isal Wasaare Prof. Cali Maxamed Geedi iyo wafdigii uu horkacaayay ayaa wafdiga Madaxwaynaha ku soo dhoweeya garoonka dayuradaha ee Magaalada Jowhar.
Booqashadan oo in muddo ahba la dhowraayay ayaa ka dhacday Magaaladda Jowhar oo uu Cabdullahi Yusuf jeclaysatay maadaama ay isku aragti yihiin Gudoomiyaha maamulka Sh/Dhexe Maxamed Dheere. Halka Raiisal Wasaare Mudane Cali M Geedi uu ku hanwaynaa in uu ka degto Magaaladda Muqdisho laakiin cadaadis xagga Madaxwaynaha kaga yimid awgeed uu uga degtay Jowhar, ugana si gudbi doono Magaalada Garowe oo saldhig u ah Col. Cabdulahi Yusuf iyo taageerayaashiisa.
Ilaa iyo hadda ma cadda raadka ay booqashadani ku yeelan doonto iska horimaadki xagga siayaasadda ahaa ee beryahan ka dhex socday Madaxwaynaha iyo Raiisal Wasaaraha ee ku saabsanaa sidii ciidan ajnabi oo ay ku jirto Dowladda Itoobiya loo keeni lahaa wadanka Somaaliya gaar ahaan Magaalada Madaxda Muqdisho.